Fakafaka: Kolontsaina mitady fandrosoana | NewsMada
Ahitana lesoka be ny tontolon’ny kolontsaina eto Madagasikara ! Ny hira avy hatrany no alehan’ny sain’ny Malagasy. Raha tomorina akaiky anefa, toa tsy ny sehatry ny hira loatra io ahitana lesoka io fa ny kolontsaina hafa. Mbola manana sehatra isehoana ny mpihira. Afaka mivelona amin’ny hira ireo « manana fahasahiana » hitady vola amin’izany, sns.
Diniho ny hafa toy ny hosodoko, teatra, fanorona, tantara an-tsary, haisoratra, tantara, teny sy fiteny, sns. Mahazo toerana sahaza azy eo anivon’ny fiarahamonina malagasy ve izy ireny ? Ao aza ireo tena tsy fantatra intsony ny fisiany. Anisan’izany, ohatra, ny fahalalana ny fomba amam-panao ary ny iainana izany hifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny. Tena lesoka goavana eo amin’ny Malagasy mihitsy io.
Matetika takona ao ambadiky ny fahombiazana na tsy fahombiazan’ny hira avokoa ireo rehetra ireo. Vanim-potoana tokony hamohazana sy hamoirana ny karazana kolontsaina ankoatra ny hira izao. Manohintohina ny « vahiny » ny fahalalan’ny Malagasy ny kolontsaina, noho izany, tsy azo iandrasana azy ireo ny asa miandry… Mila mandray andraikitra !